Tag: hadalka oo bilaash ah | Martech Zone
Tag: hadalka oo bilaash ah
Warbaahinta Bulshadu ma lagu ilaaliyaa Hadalka Xorta ah iyo Saxaafadda Xorta ah?
Jimcaha, Sebtember 13, 2013 Jimcaha, Sebtember 13, 2013 Douglas Karr
Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu cabsida badan ee lagu hanjabayo hadalka xorta ah iyo saxaafadda xorta ah ee dalkan. Golaha guurtida ayaa meel mariyay sharci gaashaan saxaafadeed oo qeexaya suxufiga iyo halka heerka kaliya ee la ilaaliyo ee saxafiyiinta ay yihiin kuwa ku howlan howlaha sharci ku aruurinta wararka. Laga soo bilaabo aragtida cagta 10,000, biilku wuxuu u muuqdaa fikrad weyn. LA Times xitaa waxay ugu yeeraysaa "Hindise sharciyeedka ilaalinta suxufiyiinta". Dhibaatadu waa luqadda hoose